Mgbe ị na-aza nsogbu kọmputa na "geek" ma ọ bụ na-agụ ntụpọ haatic, ụfọdụ n'ime ndụmọdụ ndị a ga-akwụ ụgwọ bụ imelite onye ọkwọ ụgbọala ahụ. Ka anyị hụ ihe nke a pụtara na ma ọ dị mkpa na ị ghaghị ime ya. Ndị ọkwọ ụgbọala? Kedu ihe ọkwọ ụgbọ ala? N'okwu dị mfe, ndị ọkwọ ụgbọala bụ mmemme ndị na-enye ohere ka sistemụ arụmọrụ Windows na ngwa dịgasị iche iche iji kpaa ngwaike kọmputa.
Esi egbochi nọmba na Android
Ọ bụrụ na ị na-emegharị site na oku site na nọmba ụfọdụ ma ị nwere ekwentị gam akporo, ị nwere ike igbochi ọnụ ọgụgụ a (tinye ya na blacklist) ka ị ghara ịkpọ ya, ma mee ya n'ọtụtụ ụzọ dị iche iche, nke a ga-atụle na ntụziaka . A ga - atụle ụzọ ndị a iji gbochie ọnụ ọgụgụ ahụ: iji ngwaọrụ ndị a wuru n'ime gam akporo, ngwa ndị ọzọ iji gbochie oku na-achọghị na SMS, yana iji ọrụ kwesịrị ekwesị nke ndị ọrụ mmezi telivishọn - MTS, Megafon na Beeline.
Ntọala nke isi ihe na oge kọmputa gị na-echekwa na BIOS na, ọ bụrụ na ị nwere nsogbu mgbe ị wụnye ngwaọrụ ọhụrụ, ị chefuola paswọọdụ gị ma ọ bụ naanị ịhazighị ihe n'ụzọ ziri ezi, ịnwere ike ịtọgharịa BIOS na ntọala ndabara. N'ime ntuziaka a, m ga-egosiputa ihe ị ga - esi rụgharịa BIOS na kọmputa ma ọ bụ laptọọpụ ebe ị nwere ike ịbanye na ntọala na n'ọnọdụ ahụ mgbe ọ naghị arụ ọrụ (dịka ọmụmaatụ, edoziwo paswọọdụ).
Ọ bụ obere laptọọpụ na-ebuli (ma ọ bụ, n'ọnọdụ ọ bụla, ọ siri ike), mana n'ọtụtụ ọnọdụ, ọ dị nnọọ mfe iji mụbaa RAM. Ntuziaka a site na nkwụsịtụ otu esi eme ka ebe nchekwa nke laptọọpụ dịkwuo elu ma tinye ya na ndị ọrụ novice. Ụfọdụ laptọọpụ nke afọ ndị gara aga nwere ike ịnwe nhazi nke enweghị ụkpụrụ zuru oke, dịka ọmụmaatụ, Core i7 na 4 GB nke RAM, ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịbawanye ruo 8, 16 ma ọ bụ ọbụna 32 gigabytes maka ụfọdụ laptọọpụ, nke maka ụfọdụ ngwa, egwuregwu, ọrụ na vidio na ndịna-emeputa nwere ike ịmalite ọrụ ahụ ma dị ọnụ ala.
O nwere ike ime na n'ime nchekwa data ma ọ bụ n'ebe ọzọ ị na - ebudata ihe si na Ịntanetị, ị ga - ahụ faịlụ na ndọtị .debere na aha ụfọdụ ihe dị mkpa ma ọ bụ "Enweghị nkwenye", yana nọmba na mgbatị ahụ. Achọrọ m ịzaghachi ugboro abụọ ihe ndekọ ya na ebe o si bịa, otu esi emeghe crdownload na ma ọ nwere ike wepụ - ya mere m kpebiri ịza ajụjụ ndị a n'otu obere edemede, ebe ọ bụ na ajụjụ ahụ bilitere.
Enwere m ike ịkpọ site mbadamba nkume na otu esi eme ya? O zuola nke a iji nweta kaadị SIM nke onye ọrụ yana nkwado 3G na ya, ma ọ bụ ihe ọzọ achọrọ? Isiokwu a na-akọwa otú ịkpọ oku site na mbadamba gam akporo (maka iPad, naanị m maara ụzọ maka nsụgharị dị adị nke iPad 3G, nke mbụ), na ozi bara uru banyere ịkpọ oku ekwentị site na ngwaọrụ dị otú ahụ, n'agbanyeghị nke mbadamba ihe ị na-eji. onwe
Enwere ọtụtụ ndị nchịkọta akụkọ n'ịntanetị, ndị a na-akpọkarị "photoshop online," ụfọdụ n'ime ha na-enyekwa ọrụ dị iche iche dị egwu iji dezie foto na ihe oyiyi. E nwekwara onye nchịkọta akụkọ nchịkọta akụkọ sitere n'aka onye mmepụta Photoshop - Adobe Photoshop Express Editor.
Enweelarị m ederede n'ozuzu gbasara esi ewepụ antivirus site na kọmputa. Usoro mbụ nke ntụziaka a dịkwa mma maka iwepụ Avast Antivirus, Otú ọ dị, ọbụna mgbe a na-ehichapụ ya, ihe ndị dị na kọmputa ahụ na ndekọ Windows dị, nke, ọmụmaatụ, anaghị ekwe ka wụnye Kaspersky Anti-Virus ma ọ bụ ndị ọzọ na-emegide nje virus. dee na etinyewo Avast na PC.
Ọ bụghị onye ọ bụla maara, ma enwere ohere iji mee ka na na mgbakwunye ụda ụda na mmụgharị, ọkụ ahụ na-enwusi: ọzọ, ọ nwere ike ime ya ọ bụghị naanị site na oku na-abata, kamakwa na ọkwa ndị ọzọ, dịka ọmụmaatụ, gbasara ịnata SMS ma ọ bụ ozi na ndị ozi. Nke a nkuzi kọwaa otú iji flash mgbe ị na-akpọ gam akporo.
Ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala na laptọọpụ
Na oge m n'efu, ana m aza ajụjụ site na ndị ọrụ na ajụjụ QQ na Mail.ru na azịza ọrụ. Otu n'ime ụdị ọrụ kachasịsịsịsịsịsịsịsị iche iche na-enye aka ịkwado ndị ọkwọ ụgbọala na laptọọpụ, ha na-abụkarị ụda dịka ndị a: Wụnye Windows 7, otu esi wụnye ndị ọkwọ ụgbọala na laptọọpụ Asus Ebee ka ibudata ndị ọkwọ ụgbọala na laptọọpụ nke ụdị ihe a, nye njikọ, Na ihe ndị dị otú a.
Ọ bụghị ogologo oge gara aga, edere m banyere otu esi ele saịtị ahụ maka nje, na ụbọchị ole na ole ka nke ahụ gasịrị, Microsoft wepụtara ndọtị maka ichedobe saịtị saịtị ọjọọ nke Windows Defender Protection for Google Chrome na ihe nchọgharị ndị ọzọ dabere na Chromium. Na nkowa nkenke nke ihe mgbakwunye a, ihe nwere ike ịbụ uru ya, ebe ibudata ya na otu esi etinye ya na ihe nchọgharị gị.
Etu ibudata egwu site na ụmụ klas gị
Ọ bụrụ na ịchọrọ ibudata egwu site na ụmụ klas gị na kọmputa, n'isiokwu a ị ga-enwe ike ịchọta ụzọ dị iche iche n'otu oge iji mee nke a, nke dabara maka ọnọdụ dị iche iche. Ị nwere ike bulite faịlụ ọdịyo na kọmputa gị site na iji tinye-ons (protensions) na plug-ins maka Google Chrome, Mozilla Firefox ma ọ bụ Opera nchọgharị, ma ọ bụ iji usoro free iche iche wepụtara iji budata egwu si Odnoklassniki.
Otu esi ehicha laptọọpụ - ụzọ maka ndị na-abụghị ọkachamara
Nsogbu nke laptọọpụ na-esiwanye ọkụ ma ọ bụ gbanyụọ n'oge egwuregwu na ọrụ ndị ọzọ na-achọsi ike bụ ihe kachasị mma n'etiti nsogbu ndị ọzọ niile na laptọọpụ. Otu n'ime ihe ndị kpatara isi mkpuchi nke laptọọpụ bụ uzuzu n'ime usoro jụrụ oyi. Akwụkwọ ntuziaka a ga-akọwa n'ụzọ zuru ezu otu esi ehichapụ laptọọpụ n'ájá.
VirtualBox Mebere Machine maka Beginners
Ngwaọrụ arụmọrụ bụ mmegharị ngwaọrụ na ngwaọrụ ọzọ ma ọ bụ, na gburugburu isiokwu a ma mee ka ọ dị mfe, kwe ka ị na-agba ọsọ na komputa kọmputa (dịka usoro mmemme) yana usoro arụmọrụ dị na kọmpụta gị yana otu Os. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị nwere Windows na kọmputa gị, ị nwere ike ịme Linux ma ọ bụ nsụgharị ọzọ nke Windows na igwe arụmọrụ ma rụọ ọrụ na ha dị ka kọmputa.
Ọtụtụ ndị nwe ngwaọrụ Android na-eji ha dị ka ọkọlọtọ: maka oku na ozi, gụnyere ndị ozi, dịka igwefoto, maka ilele weebụsaịtị na vidiyo, na dịka ihe mgbakwunye na netwọk mmekọrịta. Otú ọ dị, nke a abụghị ihe niile smartphone gị ma ọ bụ mbadamba. Na nyocha a - ụfọdụ ihe (ọ dịkarịa ala maka ndị ọrụ novice) ihe ngosi maka iji ngwaọrụ gam akporo.
Esi ewepụ ihe mkpofu site na desktọọpụ
Ọ bụrụ na ịchọrọ iwepụ ya na Windows 7 ma ọ bụ 8 (Echere m na otu ihe ahụ ga-eme na Windows 10), ma n'otu oge ahụ wepu ụzọ mkpirisi si na desktọọpụ, ntụziaka a ga-enyere gị aka. Omume niile dị mkpa ga-ewe nkeji ole na ole. N'agbanyeghị eziokwu ahụ na ndị mmadụ nwere mmasị na otu esi eme ka nkata ahụ egosighi, na faịlụ ndị dị na ya anaghị ehichapụ, echeghị m na ọ dị mkpa: na ụdị nke ị nwere ike ihichapụ faịlụ na enweghị ịtụba na nkata, jiri Ngbanwe + Hichapụ.
Ndị ọrụ iji wepu ihe ndị a na-achọghị na nke obi ọjọọ na ihe ntanetịpụ nchọgharị bụ taa otu n'ime ihe ndị kachasị ewu ewu n'ihi uto nke egwu dị otú ahụ, ọnụ ọgụgụ nke Malware na Adware. Ngwa Mgbapụta Junkware bụ ngwá ọrụ ndị ọzọ na-enweghị ike ịnweta nje na-enyere aka na ọnọdụ ebe Malwarebytes Anti-Malware na AdwCleaner na m na-ekwukarị anaghị arụ ọrụ.
Kọmputa na-agbanye ma gbanyụọ ozugbo
Otu n'ime nsogbu ndị nkịtị na kọmputa bụ na ọ na-agbanye ma gbanyụọ ozugbo (mgbe nke abụọ ma ọ bụ abụọ). Ọ na-adịkarị ka nke a: ịpị bọtịnụ ike malitere usoro nke ịgbanwuo, ndị fans niile amalite ma mgbe obere oge kọmputa kwụsịrị kpamkpam (mgbe ọ na - esiteghị na bọtịnụ ahụ ike anaghị agbanye kọmputa ahụ ma ọlị).